Hughes Hideaway Eurobin - I-Airbnb
Eurobin, Victoria, i-Australia
Indawo esepulazini ibungazwe ngu-Ty
U-Ty Ungumbungazi ovelele
IHughes Hideaway Eurobin inikezela ngendawo yokuhlala eseceleni eduze nomfula i-Ovens, iRail Trail nedolobha elihle laseBright.
Itholakala kumahektha ayi-15 ahlangana neMount Buffalo National Park, iHughes Hideaway iyisakhiwo esingaphandle kwekhaya lomndeni futhi inikeza ubumfihlo kanye nokuhlala yedwa endaweni yasepulazini.
Uzoba phakathi kwemizuzu eyi-15 ukusuka emadolobheni ezivakashi iBright, Porepunkah kanye neMyrtleford. Uhambo olulula lwezinsuku lokuya eMount Buffalo National Park kanye nezinkundla zokushushuluza eMount Hotham naseFalls Creek.
I-Hughes Hideaway Eurobin iyiyunithi yokulala ehlanzekile futhi ehlelekile enamakamelo angu-2 enemibono emihle ye-Ovens Valley.
Ikamelo ngalinye leyunithi liqukethe umbhede weNdlovukazi, okwenza ulungele imibhangqwana noma umndeni omncane. Igumbi lokulala elikhulu liqukethe indawo eyanele yengubo yokuhlala ekhululekile. Igumbi lokulala lesibili nalo linendlovukazi futhi kunganikezwa umbhede owodwa owengeziwe uma ucelwa.
Ikhishi lihlome ngokuphelele ngezitsha, i-cultery, ifriji kanye ne-microwave. Indawo yokuhlala ihlanganisa umqeqeshi, izihlalo kanye nethelevishini enesistimu yokuhlukanisa ukushisa / ukupholisa endaweni yokuhlala. I-Wifi ihlinzekwa ukugcina ukuxhumana kwakho nomphakathi.
Indlu yokugezela ingeyesimanje futhi ivulekile enikeza ukunethezeka ukuvuselela ngemva kosuku lokushushuluza, ukugibela i-MTB uzungeza Okugqamile noma ukuqwala imigwaqo e-Mount Buffalo.
Indawo yangaphandle engaphansi kwekhava eyimfihlo inikezwa nge-BBQ uma uzizwa sengathi ulala ebusuku. Uma kungenjalo, iqoqo elimangalisayo lezindawo zokudlela.
Umshini wokuwasha uhlinzekwa ngomugqa wezingubo.
ubusuku obungu-7 e- Eurobin
Enjoy the outdoors and travel
UTy Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Eurobin namaphethelo